Mudo intee le'eg ayuu kalluunku socon karaa isagoo aan wax cunin → Halkan ka eeg | Kalluunka
Carlos Garrido | | Quudinta kalluunka
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira xayawaanno badan oo guryaha ah oo aan ka heli karno ikhtiyaar ahaan inaan nolosha la wadaago oo aan guri nala wadaagno. Dhammaan xulashooyinkaas, kalluunka waa mid ka mid ah xayawaannada ugu caansan.
Xayawaanadan saaxiibtinimada leh waxay gaareen caan sida oo kale maxaa yeelay, runtii, uma baahna daryeel xad-dhaaf ah, si kastaba ha noqotee, waa inaad fiiro gaar ah siisaa faahfaahinta qaarkood sida cuntada. Waana taas, Mudo intee le'eg ayuu kalluun sii socon karaa isagoo aan wax cunin?
Jawaabta su’aashani runtii way faafsantahay oo mudo cayiman wali lama dhisin. Qoraalkan oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaan wax ka qabanno arrintan, innagoo bixinayna talo iyo alaabooyin kala duwan oo aan ku haysan karno markii aan ficil ahaan u suuroobayn inaan quudinno saaxiibbadeenna yar, ka dib oo dhan, cunnadooda ayaa ku xirnaan doonta intee ayuu kalluun noolaa.
1 Imisa maalmood ayuu kalluunku cuni karaa isagoo aan wax cunin?
2 Calaamadaha iyo dhaqanka kalluunka gaajaysan
3 Tilmaamaha kalluunka si uu u sii dheeraado isagoon wax cunin
4 Sidee looga hortagaa in kalluunkeenu cunto la’aan noqdo?
Imisa maalmood ayuu kalluunku cuni karaa isagoo aan wax cunin?
Sidii aan ku soo sheegay bilowgii, lama xaqiijin maalmaha saxda ah ee kalluunku u adkaysan karo cunitaan la’aan. Waa maxay sababta? Waa hagaag, aad u fudud. Waqtigaani wuxuu kuxiranyahay qodobo kaladuwan, sida noocyada kaluunka laga hadlayo, xaalada caafimaad ee kaluunka, daryeelkii horey looheli jiray, xaalada biyaha ee uu kujiro, dhamaan quudkiisii ​​hore, iwm.
Charger USB Zacro...
Si kastaba ha noqotee, haddii qiyaas la samayn karo. Xaaladaha caadiga ah, kalluunka waxaa cunto la'aan ku dhici kara ilaa 2-3 maalmood. Marka muddadan ay dhammaato, xayawaanku wuxuu muujin doonaa daciifnimo gaar ah, taas oo macquul ah marka dhinac laga eego, iyo cunno yaraanta iyo nafaqooyin la'aanta ayaa sababi doonta in difaacyadu si aad ah hoos ugu dhacaan. Xaaladdaan ayaa caafimaadka xoolaha halis gelinaysa waxayna si dhab ah u kicineysaa fursadaha kalluunka inuu cudur ku dhaco iyo, sidaas darteed, dhimasho.
Waxaa jira waqtiyo aan maqli karno sida toos loogu sheegay in kalluunka uu socon karo illaa toddobaad isagoo aan wax cunin. Hal-abuurka noocan oo kale ah wuu dhici karaa, laakiin xaqiiqdii way adag tahay, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaadan aaminin.
Haddii aad maqnaanayso in ka badan 2 ama 3 maalmood, xal aad u faa'iido badan ayaa ah sharad ku quudinta otomaatig ah, sidaa darteed kalluunku cuntada kama dhammaan doono muddada aan maqan nahay.
Calaamadaha iyo dhaqanka kalluunka gaajaysan
Haddii, sabab kasta ha noqotee, kalluunkeennu aanu cunin cunto in muddo ah, waxay muujin doontaa calaamado taxane ah oo u adeegi doona digniin digniin ah in sida ugu dhakhsaha badan wax looga qabto.
Marka hore, haddii kalluunku gaajaysan yahay waan ilaalin karnaa sida dhaqankoodu wuu ka xasilloon yahay sidii caadiga ahayd, waxay dhawr jeer u fuulaan meelaha sare ee biyaha raadinaya xoogaa cunto ah. Ugu dambeyntii, waxay noqdaan kuwo walaacsan.
Marka xigta, astaamo kale oo taxane ah ayaa soo baxa oo aan saamayn badan ku yeelan dabeecadda, laakiin waxay ku dhaqmaan xaaladda jireed ee xayawaanka waxayna soo baxaan marka geedi socodka abaarta ay si dhab ah u socoto. Waxaa laga arkaa wax kasta oo ka sarreeya maqaarkaaga iyo miisaankaaga, oo lumiya dhalaalka iyo midabka, mararka qaarkoodna soo bandhiga muuqaal ka sii daraya..
Ugu dambeyntiina, waa in la ogaadaa in marka cunnadu ay gabaabsi tahay ama ay madhnaato, kalluunku uu mari karo habsocodka welwelkaas oo kale ah, kaas oo ku qasbaya iyaga kuna kicinaya inay ku kacaan dabeecad xadka u leh cunista dadka, maadaama ay raadin aan kala go 'lahayn ay ku hayaan cuntada waxay awoodi doonaan inay weeraraan oo dilaan shaqsiyaad kale. Marka, haddii aan ku dhex aragno quraaraddeenna dhowr kalluun oo ay ku yaallo dhaawacyo baalashooda iyo dabada ama kalluun si shaki ku jiro u baaba'ay, waa calaamad muujinaysa in wax aan si wanaagsan u soconaynin.
Tilmaamaha kalluunka si uu u sii dheeraado isagoon wax cunin
Xaqiiqdii, waxaa jira xeelado yar oo jira si kalluunkayagu u sii jiro ilaa iyo inta suurtagal ah isagoo aan wax cunin, maadaama cunno la'aantu ay sababayso in xayawaanku uusan awood u yeelan karin inuu si sax ah u sii wado howlaha muhiimka u ah oo uu galo khatar daran. Sidaa darteed, waxa ugu wax ku oolka ahi waa in la isku dayo in laga hortago kalluunkeenu inuu soo maro muddo dheer oo macluul ah, in kasta oo ay run tahay in mararka qaar ay soo baxaan dhibaatooyin lama filaan ah oo aan suurtogal ka dhigayn inaan cunto siino in muddo ah.
Haddii kiis noocan oo kale ahi dhaco, waxaa jira tilmaamo ama taxaddarro kaa caawin kara kalluunkeennu in yar sii noolaado. Mid ka mid ah waa inaan kalluunkeena siino cunno qani ah oo kaladuwan markasta taas oo u oggolaanaysa iyaga inay lahaadaan keyd gaar ah oo dufan iyo tamar ah, taasina waxay ku sii haysaa caafimaad iyo xoog. Sida ugu wanaagsan ee tan lagu gaari karo waa in la diyaariyo cuntada kalluunka lagu sameeyo intaas ka sokow inay tahay mid aad u fudud, waxay noo badbaadin doontaa lacag.
Waxaan kaloo kugula talin lahaa iibso quudiyaha kalluunka si otomaatig ah. Tan waxaad ku xallin doontaa dhibaatada inta badan kiisaska.
Tallaabooyinka kale waa inay sameeyaan, iyo wax badan, oo biyo ah. Biyaha ku jira haanta kaluunka, aquariums-ka ama balliyadayada waa inay ahaadaan kuwo nadiif ah sida ugu macquulsan. Haddii aan tan ku guuleysano, waxaan ka dhigi doonnaa hoyga xayawaankeenna in laga daayo caabuqyada, bakteeriyada iyo dulinku in ay ku ciyaaraan khiyaano haddii kalluunku daciif yahay, sida dhacda markay waxna cunaan dhowr saacadood.
Ugu dambeyntii sidoo kale waa inaan fiiro gaar ah u leenahay heerarka oksijiinta ee ku jira biyaha. Dhinacani waa lagama maarmaan, maadaama heerarka oksijiintu ay fure u yihiin mustaqbalka kalluunka. Biyaha Oxygen-liita, oo ay weheliso cunno yaraan, ayaa isu beddelaya is biirsaday dilaa ah.
Sidee looga hortagaa in kalluunkeenu cunto la’aan noqdo?
Nasiib darrose, waxaa jira munaasabado badan oo ay tahay inaan ka tagno guriga, tusaale ahaan fasax, mana haysano cid aan daryeelayno oo quudin karno xoolaheena
Kalluunka, wax soo saarka qaar ayaa laga heli karaa suuqa oo ku siin kara cuntada quraaradda in muddo ah.
Waxaa jira qolof ama kiniinnoKuwa ugu caansan waa midab cadaan ah, oo lagu habeeyo haamaha kaluunka oo si tartiib tartiib ah u milma, iyagoo sii daaya walxaha qaar oo u adeega kaluunka. Waa run inaynu si gaar ah ula dhaqanno iyaga, maaddaama qaar ka mid ah walxaha ay sii daayaan ay wax ka beddeli karaan cabirka biyaha oo ay u horseedi karaan saameyn lid ku ah waxa aan dooneyno.
Si la mid ah sida kiniiniyadani u shaqeeyaan ulaha ama buskudka in aan ka helno xarun kasta oo ku takhasustay xayawaanka. Asal ahaan waxay ka kooban yihiin Waxaan u maleynayaa in la riixay, taas oo si tartiib tartiib ah loogu qasi jiray biyaha quraaradda.
Marka ugu dambeysa ee la adeegsan karo, oo laga yaabo inay tahay tan ugu waxtarka badan, waa naloo soo bandhigay ka cuntada kalluunka. Qalabkan waxaa la dul saaraa biyaha dushiisa, tusaale ahaan cirifka sare ee haanta kaluunka, waxayna u sii daayaan raashinka ku keydsan taangigiisa hagaha iyadoo lagu saleynayo barnaamijyadii hore ee aan sameynay. Aad ayey waxtar u leeyihiin oo si fudud loo heli karo. Dabcan, markay cuntadu taangiga kujirto muddo dheer way qoyaantaa waxayna lumisaa astaamo badan oo ay leedahay.
Qalabka cuntada kalluunka
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Quudinta kalluunka » Intee in le'eg ayuu kalluunku socon karaa isagoo aan wax cunin
Aad baad u mahadsantahay, runtii; Maanta uun bay isiiyaan midna ma haysto cunto kalluun. Marka berri aniga oo aamusan ayaan ku iibsan karaa: 3
Ku jawaab Annabelle
sharaxaad aad ufiican mahadsanid
Jawaab ku bixi Marco Salazar
Guriyeynta Carlos dijo
Miinadaydu ma cunin 2 sano, ma dhiman karaa?
Ku jawaab Carlos Vivienda
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa kalluunka dheddigga dhedigga mana cunin hal toddobaad ... maxaan sameeyaa
Kaluunkaygu ma cunin 2 maalmood waxaanan haystaa 6 kalluun waxaanan ka baqayaa inay is cunaan, oo aan quudin karo
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa kalluun Jabaan noocyo kala duwan ah mana cunaan ama ma saxaroodaan waxayna had iyo jeer ku sugan yihiin gunta aquarium-ka, maxaan sameyn karaa? Waxaan rajeynayaa in qof i caawiyo
Waad ku mahadsantahay talooyinka waxaan rajeynayaa kalluunkeygu inuu badbaado maadaama uu soo dhacay hadana ma doonayo inuu cuno :(
Hagaag, kalluunkeygu ma cunin muddo 4 bilood ah welina wuu nool yahay, waxaa la dhihi karaa wuxuu leeyahay diiwaanka Guines.
Meel dhigid dijo
Kalluunkeyga waxaan ugaga tagay cunto la'aan iyo oksijiin sedex bilood iyo bar, sababo laxiriira qasab xoog leh, uma maleynayn inaan kahelay iyaga oo nool, laakiin halkaas ayay joogaan, laakiin waxay ahaayeen ilaa lix iyo labaatan, waxaan helay ilaa shan iyo toban, si fiican, waad qiyaasi kartaa farxadeyda, noqo dad cun ah maxaa yeelay kama aanan helin dadka kale iyo hawo oksijiin ah meesha haddii aanan garanayn sida ay runta uga badbaadeen
Waxaan hayaa golfich aan rabin inuu wax cuno 4 maalmood, ma garanayo waxay noqon doonto t .mahadsanid
Waad salaaman tihiin, mudo ka hor, ilaa hada kaluunkaygu waa dhimanayey, aad bay u bararayaan oo cloacooda ayaa bararsan, waxaanan helay qaar ay cuneen kuwa kale, waxaan siiyaa 2 jeer maalintii maalintii waa guppies, waxaan badalaa biyaha 2dii toddobaadba mar. 3/4 aniguna waan maydhaa miirahaaga markii ugu dambaysay wax walba ka saar oo maydh biyo beddel 80%